Ubakaki wesitshalo se-Metal Lantern
Elegant metal bracket design for lantern ilenga,plant, birdhouse,i-wind chime njll.
Impahla: Yenziwe ngensimbi yensimbi engu-100% yekhwalithi ephezulu, enobuso obungagqwali kanye nokwakhiwa okuqinile, lezi ziphanyeko zodonga ziqinile futhi zinhle.Ilungele ukulenga izitshalo ngaphakathi nangaphandle.
Umhlobiso Wasekhaya: Idizayini ye-vintage hanger hook ingeza ukuthinta kwesitayela se-rustic endleleni yokungena, kuvulandi, ingadi, igumbi lokuhlala, igumbi lokudlela kanye nanoma iyiphi enye indawo yangaphakathi yangaphandle.
Kulula Ukufaka:Amahhuku e-Intpro plant kuphela ngokusebenzisa i-drill kanye ne-screwdriver, khweza ku-drywall noma i-wall stud ene-fastener efanayo.Zilingana kahle kunoma yiluphi uhlobo lwezindonga, njenge-drywall kanye ne-wall stud.Kunwetshiwe.
Elula futhi Enezinjongo Eziningi:Izingwegwe zekhwalithi ephezulu zokulengiswa kwesitshalo zingamahhuku alungele i-wind chime, izimbiza zezimbali, izibani zezintambo, izibani, imihlobiso yesiphakeli sezinyoni, izitshalo zasebhodweni noma amanye amaphrojekthi we-DIY, iziphanyeko zezitshalo eziqinile zokutshala izitshalo zasendlini nangaphandle.
Amahora angu-24 Ngemva Kwempendulo Yokuthengisa:I-Intpro ingakunikeza okwenziwa yikhasimende okuhamba phambili kanye nesevisi yangemuva kokuthengisa.Sicela uqiniseke ukuthi uyathenga, insizakalo yethu yamakhasimende izoxazulula inkinga yakho phakathi namahora angama-24.Vele uthenge ngokuzethemba!
Usayizi:6” L,8”L.10”L.12”L,18”L noma ngokwezifiso.
Qeda:I-powder coated durable matte black.
Kulula ukuyifaka: Iza nezikulufu ezifakwayo namahange.Izingwegwe zokutshala zilungele izigxobo zocingo zocingo, izigxobo zedeski, noma izindonga zangaphakathi.Amathiphu agobile asiza ukuvikela izinto.
Kusetshenziswa Kakhulu: Kuhle kakhulu ekulengeni izibani zelanga, ama-mason jar sconces, obhasikidi bezimbali ze-samll, uchungechunge lwemvula, izindlu zezinyoni, imihlobiso yamaholide.Hlobisa indlu yakho nengadi, Ukwengeza ukuthintana kobuhle bakudala!
Izesekeli Ezinhle zegumbi lakho lokuhlala, igumbi lokugezela, igumbi lokulala, indlela yokungena, ivulandi, umpheme, ingadi, uthango lwesitezi sokhuni esingemuva kunoma iyiphi enye indawo yangaphakathi yangaphandle.
Isitshalo sensimbi esihlobisa, isibani, isiphanyeko se-wind chime.
Material: Laba bakakaki bensimbi beButterfly abalengayo benziwe ngensimbi yeqophelo eliphezulu futhi bahuqwe ngempushana emnyama, abalwa nokugqwala futhi banempilo ende yesevisi.Ikhwalithi ye-Premium ibenza baqine futhi ukuphela okumnyama kwenza indawo yakho yokuhlala ibe yinhle futhi ifane nanoma yini elenga kuyo.
Umbala: Imibala emnyama noma eyenziwe ngokwezifiso.
Kulula ukuyifaka: Izingxenyekazi zekhompiyutha zokufaka zifakiwe, lenga kalula izitsha zakho, obhasikidi bezimbali nokunye okuhlotshiswe engadini ngosizo lwalesi sitshalo.
Ukuhlobisa ikhaya: Engeza ukubukeka okukhangayo ekhaya lakho noma engadini ngobakaki wethu wezitshalo zensimbi eziklanyelwe umqulu wakudala.
Abakaki bezitshalo abaqinile: Abakaki bakhiwe ngensimbi ecijile eqinile, impushana emnyama embozwe isiphetho sokumelana nokugqwala okuphakeme, kwengeza ukuthinta kobuhle kunoma yiliphi igceke.
Abakaki bensimbi beNyanga nekati besitshalo esilengayo, ilambu, indlu yezinyoni, i-wind chime.
l Idizayini yensimbi yeCAT&Moon yokulenga ilambu, isitshalo, indlu yezinyoni,i-wind chime njll.
l Ikhwalithi Ekholisayo: Insimbi eyenziwe ngesandla eyenziwe ngobuciko obuhle iqinisekisa ukuthi ingagqwali futhi iqinile.Ngeke ukupenda off, futhi kungaba ukumelana ukuguguleka kwemvula, iqhwa nokukhanya kwelanga.
l Izinhloso Eziningi: Hlobisa ikhaya lakho noma ingadi yakho ngokulenga iziphakeli zezinyoni, izibani, izitsha, izitsha zezimbali, imihlobiso yamaholide, izibani zezintambo, ama-wind chime, imihlobiso, nokuningi!
l Usayizi:6” L,8”L.10”L.12”L,18”L noma ngokwezifiso.
l Qeda: I-powder coated durable matte black.
l Kulula ukuyifaka: Iza nezikulufu ezifakwayo namahange.Izingwegwe zokutshala zilungele izigxobo zocingo zocingo, izigxobo zedeski, noma izindonga zangaphakathi.Amathiphu agobile asiza ukuvikela izinto.
l Isitayela: Ubakaki wezitshalo oqondile olinganiselwe unikeza ukubukeka okukhangayo, kwendabuko.Isiphetho esimhlophe noma esimnyama sigcwalisa ngokumangalisayo noma yini elenga kuso, kwengeza ubuhle nobuhle ekhaya lakho noma engadini.Ukufanisa izikulufu ezimhlophe/ezimnyama kugcina ukubukeka okungaguquki, nokuchachambile.
l Ngemuva Kwesevisi Yokuthengisa: Uma unemibuzo ngemikhiqizo yethu, sicela uvele uxhumane nathi.Sizokukhonza ngenhliziyo yonke.Futhi sithemba ukuthi uzoba nesipiliyoni esimnandi sokuthenga esitolo sethu.
l I-OEM & ODM: Senza yonke imikhiqizo yensimbi eyenziwe ngokwezifiso.Sinethimba lokuklama lochwepheshe elingakha imiklamo ngokwemibono yamakhasimende.Vele usazise uma uneminye imibono engqondweni yakho.Sizokwenza umcabango wakho ube yiqiniso.
Ubakaki wesitshalo sovemvane Isiphanyeko sesitshalo sensimbi
Usayizi:6” L, 8”L, 10”L, 12”L,18”L noma osayizi abenziwe ngokwezifiso.
Material: Insimbi yekhwalithi enhle
Kulula ukuyifaka: Ubakaki ngamunye ufika nezikulufu zokukhweza namahange.Isikulufu sensimbi singaluma ukhuni noma odongeni ngokushesha futhi kalula, ngakho vele uthole indawo eyisicaba bese ungaqala uhlelo lwakho lokuhlobisa.
Izinhloso eziningi: Kuhle kakhulu ekulengeni izibani zelanga, ama-mason jar sconces, obhasikidi bezimbali ezincane, i-wain chain, izindlu zezinyoni, nemihlobiso yamaholide.Hlobisa indlu yakho nengadi, wengeze ukuthinta kobuhle bakudala!
Izesekeli Ezinhle zegumbi lakho lokuhlala, igumbi lokugezela, igumbi lokulala, indlela yokungena, i-patio, umpheme, ingadi, uthango lwesitezi sokhuni esingemuva kanye nanoma yiziphi ezinye izindawo zangaphandle zangaphandle.
Mayelana nathi: Umsebenzi wethu UKUKHIPHA NGE-LASER.Senza noma yiluphi uhlobo lomkhiqizo wensimbi.I-SHENGRUI ihlinzeka ngemikhiqizo esezingeni eliphezulu kanye nensizakalo ephumelelayo yangemva kokuthengisa.Uma unombuzo mayelana nemikhiqizo yethu, sicela usithinte.Sizokunikeza isixazululo ngokushesha ngangokunokwenzeka.
I-BIRD metal bracket design ye-lantern elengayo,plant, birdhouse,i-wind chime njll.
Material: Laba bakakaki bensimbi elengayo benziwe ngensimbi yeqophelo eliphezulu futhi bahuqwe ngempushana emnyama.Azilwa nokugqwala futhi zinenkonzo ende yokuphila.Ikhwalithi ye-Premium ibenza baqine futhi ukuphela okumnyama kwenza indawo yakho yokuhlala ibe yinhle futhi ifane nanoma yini elenga kuyo.